मकै आयातको अवस्था | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण मकै आयातको अवस्था
on: २६ फाल्गुन २०७५, आईतवार ०६:१९ लेख | दृष्टिकोण
मकै आयातको अवस्था
नेपालमा प्रमुख खाद्यान्नमध्ये धानपछि मकैलाई मानिन्छ । परम्परागत खानामा रहने गरेको विविधताको बानी छोडी धानको भातमा बढी निर्भर हुँदा र धानको उत्पादन पनि माग अनुसार बढ्न नसक्दा धान तथा चामल माथिको परनिर्भरता बढ्न गएको छ । त्यसैगरी मागको तुलनामा मकैको उत्पादन पनि बढ्न नसकेको कारणले हुनसक्छ यसको आयात वार्षिक रूपमा बढ्दै गएको छ । आयात बढ्नुको अर्को कारण खाद्यान्नका साथै पशु आहारका रूपमा पनि यसको बढ्दो प्रयोग हुने गरेकाले हुन सक्छ । एक तथ्यांकका अनुसार नेपालमा कुल उत्पादित मकैको ३० प्रतिशत अंश दानामा खपत हुँदै आएका छ । आयातित मकैको हकमा पनि यही अनुपात लागू हुने देखिन्छ । कृषि प्रधान देशमा प्रमुख खाद्यान्न माथिको परनिर्भरता बढ्नु राम्रो पक्कै होइन ।
यस लेखमा दोस्रो प्रमुख खाद्यान्नका रूपमा रहिआएको मकैको विगत केही वर्षदेखिको आयात प्रवृत्ति, गतवर्ष कुनकुन देशबाट केकति, कस्तो रूप वा प्रकारमा आयात भएको रहेछ तथ्यांक प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ । यसमा भन्सार विभागको वैदेशिक व्यापार तथ्यांकलाई आधार मानिएको छ ।
हाल नेपालमा आयात हुने मकै वा यससँग सम्बद्ध खाद्यवस्तुका रूप वा अवस्था यस प्रकार रहेको छ : मकै (बीउ बाहेकको) मकै गेडा हाल प्रमुख आयातका रूपमा रहेको छ । मकै बीउ (गेडा), मकैको स्टार्च, कुटेको मकै, मकैको प्रशोधित तेल, मकैको पीठो, भूस हटाएको, फलेको, टुक्रा पारेको वा पिंधेको मकै आयात भएको पाइन्छ ।
आयात हुने मकैको प्रशोधित वा अप्रशोधित रूप वा अवस्था सबै उपर्युक्त शीर्षकमा समेटिएको छ । यद्यपि प्रमुख आयात भने बीउ बाहेकको मकै गेडा रूप रहेको छ । यसको तुलनामा अन्य विविध रूपको आयात निकै कम मूल्यको भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
तथ्यांक स्रोत : भन्सार विभाग
विगत ५ वर्षमा भएको मकैको आयात तथ्यांक हेर्दा निरन्तर रूपमा वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७०÷७१ मा रू. ७ अर्ब ५८ करोड मूल्यको आयात भएकोमा आव २०७४/७५ मा आइपुग्दा रू. १२ अर्ब ७८ करोड मूल्यको आयात भएको छ । यस ५ वर्षको अवधिमा मात्र मूल्यका हिसाबले दुई तिहाइभन्दा बढी अंशले आयातमा वृद्धि भएको देखिन्छ ।
विगत ५ वर्षमा परिमाणका हिसाबले पनि निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ । मकैका आयातित विविध रूपमध्ये सबैभन्दा बढी आयात हुने बीउ बाहेकको मकै गेडा (जुन मकै आयात मूल्यका हिसाबले ९५ प्रतिशतभन्दा बढी अंश ओगट्दै आएको छ) को तुलनात्मक परिमाण हेर्दा आव २०७०/७१ मा २ लाख ८१ हजार मे.टन आयात भएकोमा वार्षिक रूपमा क्रमशः वृद्धि हुँदै आव २०७४/७५ मा आइपुग्दा ४ लाख ९३ हजार मे.टन आयात भएको देखिन्छ । यस ५ वर्षको अवधिमा ७५ प्रतिशतको वृद्धिलाई बढी नै भएको मान्नुपर्छ । यी वर्षमा प्रतिकेजी आयात मूल्य रू. २५ देखि रू. ३० रहेको पाइन्छ ।
गत आव २०७४/७५ मा मकै गेडा रू. १२ अर्ब २६ करोड ६६ लाख मूल्यको आयात भएको थियो । यो आयात मकैजन्य वस्तुको कुल आयात रू. १२ अर्ब ७७ करोड ९० लाख मूल्यको ९६ दशमलव ० प्रतिशत हुन आउँछ । यसैगरी दोस्रो स्थानमा मकै बीउ (गेडा) रू. २८ करोड ८० लाख मूल्यको आयात भएको थियो । यो आयात मकैजन्य वस्तुको कुल आयातको २ दशमलव ३ प्रतिशत अंश हुन आउँछ । यसपछि मकैको स्टार्च रू. १५ करोड ६७ लाख मूल्यको (१ दशमलव २ प्रतिशत अंश) आयात भएको थियो ।
देशगत रूपमा आयात हेर्दा आ व २०७४/७५ मा प्रमुख रूपमा आयात गरिएका देशहरूमा भारतबाट बीउ बाहेकको मकै गेडा सबैभन्दा बढी अर्थात् रू. ११ अर्ब ९२ करोड २६ लाख मूल्यको (मकैजन्य वस्तुको कुल आयात मूल्यको ९३ दशमलव ३ प्रतिशत), अर्जेन्टिनाबाट यही रूपको रू. ३१ करोड ६० लाख मूल्यको (कुल आयातको २ दशमलव ४७ प्रतिशत), भारतबाट मकै बीउ (गेडा) रू. २३ करोड ८९ लाख मूल्यको (कुल आयातको १.८७ प्रतिशत), भारतबाटै मकैको स्टार्च रू. १५ करोड ६४ लाख मूल्यको (कुल आयातको १ दशमलव २२ प्रतिशत), अर्जेन्टिनाबाट मकै बीउ (गेडा) रू. ४ करोड ३१ लाख मूल्यको (कुल आयातको शून्य दशमलव ३४ प्रतिशत) आयात भएको थियो ।
लेखक भन्सार विभागका तथ्यांक अधिकृत हुन् ।